जाडो मौसम र मानव छालामा हुने परिवर्तन अनि समस्या – Health Post Nepal
२०७७ मंसिर १० गते १०:४९
नेपालमा हरेक वर्ष दसैं-तिहारपछि जाडो सुरु हुने गर्छ। तर, यस वर्ष भने दसैं सकिनासाथ दिनदिनै जाडो बढेको हामीले महसुस गरिरहेका छौं । जाडो मौसम छालाका लागि खासै अनुकूल मानिँदैन । त्यसैले जाडोमा गर्मी महिनाभन्दा छालालाई अझ बढी स्याहार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
जाडोमा चिसो स्याँठले छालाको सुख्खापन बढाउँछ । त्यसैले जाडो सुरु हुने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला ओठ सुख्खा हुने समस्या हुने गर्छ । चिसो वातावरण र सुख्खा हावाले गर्दा छालाको नरमपन हरेक दिन हरेक सेकेन्ड खोसिने गर्छ । यस अवस्थामा छालाको तुरुन्तै हेरविचार नगरे सुख्खा छाला फुट्ने, एलर्जी हुने, रगत निस्किने जस्ता विभिन्न समस्या उत्पन्न हुन्छन् । जसले सौन्दर्यमा ह्रास ल्याउनुका साथै अनुहार फुस्रो र अस्वस्थ देखिन्छ ।
जब बाहिरी वातावरणको तापक्रम हाम्रो शरीरको भन्दा कम हुन्छ तब हाम्रो शरीरको ताप वातावरणले तान्न थाल्छ । यसले गर्दा हाम्रो शरीरबाट पानीको मात्रा छिन्न भइरहेको हुन्छ र छाला सुख्खा हुन्छ । यस्तोमा सबैभन्दा बढी एक्सपोज हुने भागहरू जस्तोः अनुहार, हातलगायत भाग बढी सुख्खा हुन्छन् ।
कसैकसैको जन्मजात नै सुख्खा छाला हुन्छ । सुख्खा छालालाई दुई भागमा विभाजन गरिन्छ ।
वंशाणुगत सुख्खा छाला भन्नाले कसैको छाला जन्मजात नै सुख्खा तथा कत्ला हुन्छ । यो एकप्रकारको रोग हो । विशेष गरेर एलर्जी हुने व्यक्तिमा, दमका बिरामी, हर्मोन समस्या, थाइराइडका बिरामी, भिटामिन डी र ईको कमी भएका व्यक्तिमा छाला सुख्खा हुन्छ ।
पछि हुने सुख्खा छाला
– साबुनको धेरै प्रयोगले छाला सुख्खा हुनुका साथै फुट्ने समस्या पनि बढ्छ ।
– धेरै तातोपानीले नुहाउनाले पनि छाला सुख्खा हुन्छ ।
– ब्लड प्रेसरको औषधी सेवन गर्नेमा छाला सुख्खा हुने समस्या धेरै हुन्छ ।
– त्यसैगरी विभिन्न रोगका औषधी सेवन गर्नेमा पनि छाला सुख्खा हुने समस्या बढी हुन्छ । जस्तोः युरिन धेरै जाने औषधी सेवन, बोसो घटाउने औषधी सेवन, सुगरको औषधी सेवन गर्नेमा छाला सुख्खा हुने समस्या बढी हुन्छ ।
छाला सुख्खा हुनेलाई चिलाउने समस्या बढी हुन्छ । कहिलेकाहीँ त चिलाउँदा चिलाउँदै घाउ नै हुन पनि सक्छ । यस्तो अवस्थामा विशेष सावधानी अपनाउन जरुरी हुन्छ ।
किन हुन्छ जाडो महिनामा सुख्खा छाला?
जाडो मौसममा वायुको आर्द्रता कम हुन्छ । यसले हावामा पानीको मात्रा कम हुनपुग्छ । सुख्खा वायुमण्डलको असर छालामा पर्छ । छालाको नरमपन हराउँछ । यसले गर्दा छाला रुखो हुन्छ, फुट्छ, चायापोतो आउँछ ।
त्यतिमात्र होइन, जाडो महिनामा शरीरमा विभिन्न किसिमका एलर्जी पनि देखा पर्छन्। ऊनका लुगा लगाउने हुँदा एलर्जी भएर शरीर चिलाउने, पोल्ने हुन्छ । चाडोमा हातखुट्टा सुन्निने समस्या पनि धेरै देखिन्छ, त्यसैले पनि हामी धेरै घाममा बस्ने, आगो ताप्ने, हिटर ताप्ने गर्दा हाम्रो छाला सुख्खा हुँदै जान्छ।
जाडोको घाम रापिलो हुने हुँदा छालामा भएको चिल्लो सोसेर छाला सुख्खा बनाउँछ । घामले गर्दा अनुहारमा चाया बढ्नुका साथसाथै अनुहारमा चाउरिपन बढ्दै जान्छ । त्यसैले जाडोमा घाममा बस्दा वा घरबाहिर निस्कँदा सनक्रिम बढी एसपिएफ भएको प्रयोग गर्नुपर्दछ।
जाडोमा हामीले धेरै साबुन प्रयोग गर्नाले हाम्रो छाला सुख्खा हुँदै जान्छ, त्यसैले जाडोमा साबुनको सकेसम्म कम प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्छ वा बच्चालाई प्रयोग गर्ने साबुन अथवा ग्लिसरिन भएको साबुनको प्रयोग गर्न सक्छौं।
जाडोमा हामीले फेसवासको प्रयोग गर्दा पनि माइल्ड खालको प्रयोग गर्ने र तुरुन्तै मोस्चराइज क्रिम प्रयोग गर्न सक्छौं, त्यसो गर्दा जाडोमा मोस्चराइज हराउन पाउँदैन।
जाडो याममा हिटर ताप्ने, घाममा धेरै बस्दा शरीरमा पानीको मात्रा पनि कम हुने हुँदा प्रशस्त मात्रामा मनतातो पानी पिउनुपर्दछ किनभने हातखुट्टा धेरै फुट्नुको कारण पनि शरीरमा पानीको मात्रा कम भएकाले हो।
मोस्चराइजजिङ लोसनक्रिम जाडो र गर्मी महिनाका भिन्न हुन्छन् । गर्मीमा प्रयोग गर्ने क्रिमले जाडोमा काम नगर्न पनि सक्छ । त्यसैले जाडोमा प्रयोग गर्ने मोस्चराइज लोसनको प्रयोग गर्नुपर्छ किनभने जाडोमा प्रयोग गर्ने लोसनमा बढी मोस्चराइज वा चिल्लो खालको हुन्छ।
हामीले जाडो महिनाामा धेरै ग्लिसिरिन प्रयोग गर्ने गर्दछौँ। त्यो राम्रो पनि हो । ग्लिसिरिन प्रयोग गर्दा हामीले ग्लिसिरिनमात्र प्रयोग गर्नु हुँदैन किनभने ग्लिसिरिनमा पानी सोस्ने शक्ति हुन्छ र ग्लिसिरिनमात्र प्रयोग गर्नाले शरीरमा भएको चिल्लो पदार्थ सोसेर छाला झन् सुख्खा बनाउने गर्दछ, त्यसैले ग्लिसिरिन प्रयोग गर्दा जहिले पनि एक चम्चा ग्लिसिरिनमा दुई चम्चा पानी वा रोज वाटर वा कागती मिसाएर प्रयोग गर्दा उपयुक्त हुन्छ।
जाडोमा खुट्टा फुटेर हैरान भइन्छ, त्यो बेलामा खुट्टा फुट्ने समस्या भएकाले खुट्टालाई बनाएको क्रिम लगाउनुपर्छ । त्यसमा धेरै मोस्चराइज केमिकल हालेर बनाइएकाले फुटेको खुट्टा छिटो निको हुन मद्दत गर्छ।
जाडोमा हामीले नुहाउँदा तातोपानी प्रयोग गर्ने गर्दछौं तर धेरै तातोपानी प्रयोग गर्दा शरीर सुख्खा हुन्छ। जाडोमा नुहाँउदा जहिले पनि मनतातो पानीले नुहाउने र नुहाउनासाथ अलिअलि पानी पुछेर मोस्चराइज लोसन प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसो गर्नाले शरीरको चिल्लो कम हुन पाउँदैन।
जाडोमा कपाल रुखो हुने हुँदा हप्ताको एकपटक तेल लगाउनुपर्दछ र छिटो–छिटो कपालमा स्याम्पु प्रयोग गर्नु हुँदैन, धेरै स्याम्पु प्रयोगले कपाल रुखो हुन्छ।
जाडोको समय वा सुख्खा धुलो चल्ने मौसममा सबैभन्दा बढी ओठ फुट्छ । बढी चिसो हुँदा ओठमा रहेको तैलीय पदार्थ निकाल्ने ग्रन्थीहरूले कम तेल निकाल्छन् र फुट्न सुरु हुन्छ ।
‘चिनप्लान’ भनेको के हो? कसरी बच्ने यसबाट?
जाडोमा छाला सुक्खा हुनुका साथै हात, खुट्टाका औंला रातो भएर सुन्निने समस्याले धेरेलाई सताउँछ । जाडोले औंला रातो भएर सुन्निनुलाई ‘चिनप्लान’ भनिन्छ । त्यो पनि छालाको रोग हो । हात, खुट्टाका औंला रातो भएर सुन्निने काठमाडौंलगायत देशका पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा धेरैलाई हुने गरेको छ ।
पानी खेलाउनुभन्दा अगाडि रबरको पन्जा लगाएर काम गरे औंला सुन्निँदैन । यस्तै औंलालाई रातो भएर सुन्निन नदिन ‘हट वाटर ब्याग’ ले हात, खुट्टाका औंलामा सेक्नुपर्छ । जुत्ता लगाउँदा पातलो सोल भएको लगाउन हुँदैन । ‘स्पोर्ट टाइप’ को जुत्ता लगाउनुपर्छ ।पन्जा लगाउनुपर्दछ ।
हिउँले खानु भनेको के हो? यसबाट कसरी बच्ने?
यो समस्या विशेषगरी हिउँ पर्ने ठाउँमा देखिन्छ । शरीरको कुनै पनि अंग धेरै लामो समयसम्म हिँउ वा चिसो पानीको सम्पर्कमा रहिरहे यो समस्या हुनसक्छ । यसमा शरिरका मूल भागबाट टाढा रहेका अंग खासगरी हात खुट्टाका औंला, अनुहार, नाक, कान आदि हिउँले खानसक्छ। त्यसैले शरिरलाई हिउँ वा चिसो वस्तुबाट जोगाउनु नै राम्रो हुन्छ । यदि धेरै नै नराम्रोसँग हिउले खाएमा उक्त ठाउँलाई चिरेर नै फाल्नुपर्ने अवस्था पनि आउनसक्छ ।
जाडोमा छाला चम्किलो, मुलायम बनाइराख्न निम्न कुरामा ध्यान दिनुपर्छ :
१. घरबाहिर निस्कँदा आफ्नो छालालाई सुहाउनेखालको सन प्रोटेक्सन क्रिम लगाउनुपर्छ र राति सुत्नुभन्दा अगाडि सफा पानीले मुख धोएरमात्र सुत्नुपर्छ ।
२. घरबाहिर निस्कँदा अनिवार्य मास्कका साथै स्कार्फ लगानुपर्छ । सनग्लास लगाउनाले आँखालाई पनि सुरक्षा गर्छ ।
३. प्रशस्तमात्रामा पानी, फलफूल खानुपर्छ ।
४. छालालाई सुहाउने लोसन शरीरका विभिन्न भागमा लगाइराख्नाले छालालाई सुख्खा हुन दिँदैन ।
५. नुहाउनका लागि कहिल्यै पनि धेरै तातोपानी प्रयोग गर्नु हुँदैन । यसले छालालाई सुक्खा तथा खस्रो बनाउँछ । जसले गर्दा उमेरको असर पनि छालामा तीव्र तरिकाले देखिन्छ ।
६. चिसो मौसममा रुम हिटर तथा ड्रायरको प्रयोग धेरैले गर्छन् । यसको अधिक प्रयोग गर्नु हुँदैन । यसले पनि छाला सुक्खा बनाउँछ ।
७. चिसो मौसममा मोस्चराइजरको महत्व अझ बढी हुन्छ । छालाको मोस्चराइज सही तरिकाले गर्नाले नरम बनाइराख्न सहयोग पुग्छ ।
८. यो मौसममा घरबाहिर निस्कँदा शरीरलाईल पूरै ढाक्ने गरी न्यानो बनाउनुपर्छ । यसले शरीरलाई न्यानो बनाउनुका साथै चिसो हावालाई शरीरमा छिर्नबाट जोगाउँछ । चिसो हावाले छालालाई फुस्रो बनाउँछ ।
९.आफ्नो खानपिनमा पनि पूरै ध्यान राख्नुपर्छ । पर्याप्त पानी पिउनुका साथै खानामा पनि ओमेगा, फ्याट तथा भिटामिन सीयुक्त परिकार सेवन गर्नुपर्छ । यस्तो परिकारले छाला नरम, सुन्दर तथा आकर्षक देखाउन मद्दत गर्छ ।